November 2020 - NepTimes
အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း အိုဗာမား ထုတ်ပြောခဲ့သည့် မျက်နှာရေထူ စည်းမစောင့်တတ်သော တရုတ်အစိုးရ
a fella | 19/11/2020
အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း အိုဗာမား ထုတ်ပြောခဲ့သည့် မျက်နှာရေထူ စည်းမစောင့်တတ်သော တရုတ်အစိုးရ *အောကျတှငျ ယူနီကုတျဖွငျ့ ဖျောပွထားပါသညျ။ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း(Barack Obama)ကိုယ်တိုင်ရေးသားခဲ့သည့်”A Promised Land” အမည်ရှိကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်/မှတ်တမ်းများအားစုစည်းရေးသားခဲ့သောစာအုပ်ထွက်လာပါတယ်။ Obama ဟာ ၂၀၀၉မှ၂၀၁၇အထိအမေရိကန်သမ္မတသက်တမ်းနှစ်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး Dreams from My Father နှင့် The Audacity of Hope
နဂါး နှင့် လင်းယုန် ၏ရေအောက်စစ်ဆင်ရေးမျှခြေများ ⭐တရုတ်တို့သည်၎င်းတို့၏ သမရိုးကျရေငုပ်သဘောင်္တပ်ဖွဲ့အကြီးအကျယ်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသမရိုးကျရေငုပ်သဘောင်္တပ်ဖွဲ့ကြီးအားပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင်အရေအတွက်နည်း ပါးသော်လည်း ဆက်လက်တိုးချဲ့လျှက်ရှိသည့် ညူကလီးယားရေငုပ်သဘောင်္တပ်ဖွဲ့အားလည်းပိုင်ဆိုင်ထား ပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် အဆင့်မြင့်တင်ထားသည် AIP စနစ်အပါအ၀င် နည်းပညာသစ်များသုံးစွဲထားသည့် ယွန်အတန်းအစား ဒီဇယ်လျှပ်စစ်ရေငုပ်သဘောင်္များတည်ဆောက်ရေးတွင်ပိုမိုဝါယမစိုက်ထုတ်လျှက်ရှိပါသည်။ ⭐တရုတ်တို့၏ဒီဇယ်ေ၇ငုပ်သဘောင်္များသည် တာဝန်အမျိုးမျိုးကိုထမ်းဆောင်နိုင်သော တရုတ်ရေတပ်၏ အခြေခံတစ်ခုဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ပိုမိုအရေးကြီးသောအချက်မှာ ပီကင်းအစိုးသည် တရုတ်နိုင်ငံ ပတ်ဝန်းကျင်ဆက်စပ်
ရုရှား၏ထိပ်တန်းလက်နက်အဆင့်(၂၇) မဟာဗျူဟာမြောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ် Tupolev Tu-160 “Blackjack” ( Tu-160 သည်တောင်ပံ များကို ပုံစံအမျိုးမျိုးလုပ်ကာ ပျံသန်းနိုင်သော ကမ္ဘာ့တစ်ခု တည်း ဗုံးကြဲလေယာဉ်ဖြစ် )
ရုရှား၏ထိပ်တန်းလက်နက်အဆင့်(၂၇) မဟာဗျူဟာမြောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ် Tupolev Tu-160 “Blackjack” ( Tu-160 သည်တောင်ပံ များကို ပုံစံအမျိုးမျိုးလုပ်ကာ ပျံသန်းနိုင်သော ကမ္ဘာ့တစ်ခု တည်း ဗုံးကြဲလေယာဉ်ဖြစ် ) *အောကျတှငျ ယူနီကုတျဖွငျ့ ဖျောပွထားပါသညျ။ စစ်အေးကာလတွင် အမေရိကန်၏ စစ်ရေးဆိုင်ရာအရေး ကြီးပစ်မှတ်များကို တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် Tu-160 ဗုံးကြဲ လေယာဉ်ကို ၁၉၈၇ မှ
ကမ္ဘာတစ်​ဝန်းကတပ်​မ​တော်​များရဲ့ စစ်​လက်​နက်​များကိုအမြင့်​တင်​​ပေး​နေသည့် Saab (or) Saab Group နှင့်​နာမည်​​ကျော်​ Gripen တိုက်​​လေယာဉ်​
ကမ္ဘာတစ်​ဝန်းကတပ်​မ​တော်​များရဲ့ စစ်​လက်​နက်​များကိုအမြင့်​တင်​​ပေး​နေသည့် Saab (or) Saab Group နှင့်​နာမည်​​ကျော်​ Gripen တိုက်​​လေယာဉ်​ ထိုင်းတော်ဝင်ရေတပ်မေ​တ်ာဟာ1990 ပြည့်နှစ်ကစပြီး ခေတ်မှီရေတပ်အဖြစ်သို့ တက်လှမ်းနိင်​ရန်အတွက် ဖရီးဂိတ်စစ်ရေယာဉ်ကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ရာ ဈေးနူန်းချိုသာသည့်​ တရုတ်​နိင်​ငံ ရှန်ဟိုင်းမြို့China State Shipbuilding Corporation မှ​ဆောက်​လုပ်​​သော ဖရီးဂိတ်​စစ်​​ရေယာဉ်​ကို​ ရွှေးချယ်​ခဲ့ပါတယ်​။ ထို့​ကြောင့်​ 1995ခုနှစ်တွင် ထိုင်းေ​​တ်ာဝင်ေ​​ရတပ်သို့ HTMS Naresuan
ဂျာမဏီတပ်မတော်၏ Heron 1 UAS မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် အာဖဂန်နစ္စတန်၌ပျက်ကျမူဖြစ်ပွား ( ပျက်ကျတာ ပထမဦးဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ ဂျာမဏီမှာ အမြဲပျက်ကျ နေကြလား….)
ဂျာမဏီတပ်မတော်၏ Heron 1 UAS မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် အာဖဂန်နစ္စတန်၌ပျက်ကျမူဖြစ်ပွား ( ပျက်ကျတာ ပထမဦးဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ ဂျာမဏီမှာ အမြဲပျက်ကျ နေကြလား….) *အောကျတှငျ ယူနီကုတျဖွငျ့ ဖျောပွထားပါသညျ။ ဂျာမဏီလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့၏ Heron 1 UAS စနစ်သည် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ Mazar-e-Sharif ဒေသ၏ အရှေ့ဘက်၌ ပျက်ကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။ အစ္စရေးထုတ်အဆိုပါ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သည်
ရန်ကုန်မိုးပျံအမြန်လမ်းစီမံကိန်းအပိုင်း(၁)အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၈၀၀ ကုန်ကျမည်ဟု ခန့်မှန်း ( အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၈၀၀ ………)
ရန်ကုန်မိုးပျံအမြန်လမ်းစီမံကိန်းအပိုင်း(၁)အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၈၀၀ ကုန်ကျမည်ဟု ခန့်မှန်း ( အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၈၀၀ ………) *အောကျတှငျ ယူနီကုတျဖွငျ့ ဖျောပွထားပါသညျ။ ရန်ကုန်မိုးပျံအမြန်လမ်းစီမံကိန်းအပိုင်း(၁)အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၈၀၀ ကုန်ကျမည်ဟု ခန့်မှန်း ထားကြောင်း ရန်ကုန်မိုးပျံအမြန်လမ်းနှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်အပြင်ပတ်လမ်းစီမံကိန်း ဦးဆောင်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဟန်ဇော်မှ ပြောသည်။
၂၀၂၇ ခုနှစ်တွင် အကြီးစားအမြောက်စနစ်များ လဲလှယ်မှုကိုပြုလုပ်မည်ဟု ဆိုလာသော ရုရှား ( ၂၀၂၇မှာ Tornado-S အတွဲလိုက်ဒုံးပစ်လောင်ချာစနစ်ဟာ ရန်သူတိုင်းအတွက် အိပ်မက်ဆိုးကြီး ဖြစ်လာမှာလား…)
၂၀၂၇ ခုနှစ်တွင် အကြီးစားအမြောက်စနစ်များ လဲလှယ်မှုကိုပြုလုပ်မည်ဟု ဆိုလာသော ရုရှား ( ၂၀၂၇မှာ Tornado-S အတွဲလိုက်ဒုံးပစ်လောင်ချာစနစ်ဟာ ရန်သူတိုင်းအတွက် အိပ်မက်ဆိုးကြီး ဖြစ်လာမှာလား…) *အောကျတှငျ ယူနီကုတျဖွငျ့ ဖျောပွထားပါသညျ။ ရုရှားဒုံးနှင့်အမြောက်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး Mikhail Matveyevsky က ၂၀၂၇ ခုနှစ်မှာ အကြီးစားအမြောက်စနစ်များ လဲလှယ်မှုကိုပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။ ရုရှားအနေဖြင့် Smerch
“Stay Home မဟုတ်တဲ့ မြို့နယ်တွေမှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေ၊ ဘာသာရေး နေရာတွေ ပြန်ဖွင့် ပေးတော့မှာ ဖြစ်လို့ Stay Home သတ်မှတ်ထားတဲ့ မြို့နယ်တွေကို ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်”
“Stay Home မဟုတ်တဲ့ မြို့နယ်တွေမှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေ၊ ဘာသာရေး နေရာတွေ ပြန်ဖွင့် ပေးတော့မှာ ဖြစ်လို့ Stay Home သတ်မှတ်ထားတဲ့ မြို့နယ်တွေကို ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်” *အောကျတှငျ ယူနီကုတျဖွငျ့ ဖျောပွထားပါသညျ။ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရှိ Stay Home သတ်မှတ်ထားသည့် မြို့နယ်များ Stay at Home မပါဝင်သည့်မြို့နယ်များတွင်
နိုင်ငံတော် ကြွယ်ဝရေးလုပ်ငန်း ဖော်ဆောင်ရာတွင် NLD က ကြီးမားသော အောင်မြင်မှုရမည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင် ပြော
နိုင်ငံတော် ကြွယ်ဝရေးလုပ်ငန်း ဖော်ဆောင်ရာတွင် NLD က ကြီးမားသော အောင်မြင်မှုရမည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင် ပြော *အောကျတှငျ ယူနီကုတျဖွငျ့ ဖျောပွထားပါသညျ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) သည် နိုင်ငံတော် ချမ်းသာကြွယ်ဝရေးဟူသော မွန်မြတ်သည့် လုပ်ငန်းကြီး ဖော်ဆောင်ရာတွင်
ဟီလာရီ ကလင်တန် ပြောသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာ….
a fella | 18/11/2020
ဟီလာရီ ကလင်တန် ပြောသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာ…. *အောကျတှငျ ယူနီကုတျဖွငျ့ ဖျောပွထားပါသညျ။ “ဟီလာရီ ပြောသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်” သူမ ပုံက ပိန်ပိန်သွယ်သွယ် နှင့် ပျော့ဖတ်ဖတ် ဖြစ်နေသည်ဟူ၍ပင် ပြောနိုင်သည်။ သို့သော် သူမ၏ အတွင်းစိတ်ဓါတ် သည် အားမာန်အပြည့်နှင့် ရှိနေသည်ကိုက မည်သူမျှ သတိမမူမိဘဲ ရှိကြလိမ့်မည်